Dombo tiyi Vagadziri - China Rock teki Fekitori & vatengesi
Wuyi Narcissus Tea Inozivikanwa Wuyi Dombo Oolong Tea Shuixian Oolong tii
Wuyi Narcissus iti inozivikanwa munhoroondo uye imwe yemhando mbiri dzeOolong tii kuchamhembe kweFujian. … Nekuda kwenzvimbo yakasarudzika yemamiriro ekunze, Wuyi Mountain yakawedzera zvishoma nezvishoma kunaka kwe narcissus. Mazuva ano, korona yemuti iri refu uye mashizha akafara uye makobvu, uye chimiro cheiyo chai chakakora uye chakasimba nemuvara unopenya. Mushure mekubika, kunhuhwirira kune mashizha e orchid uye ruvara rwemuto rwakadzika. Orenji inopokana nekubika, uye pasi peshizha iri yero uye inopenya neinnabar. Iyo ipfuma yechinyakare yeWuyi rock tii.
Wuyi Cinnamon Yemhando Yekusimbisa Herbaceous Natural Hutano Wuyi Cinnamon Tea
Hunhu hukuru uye mukana weWuyi Cinnamon kunhuwirira kwayo kwakapinza uye kunhuwirira kwakasiyana. Cinnamon, inozivikanwawo seYugui, inowanikwa kuMazhen Peak yeWuyi Mountain, kana Huiyuan Rock. Asi zvisinei hazvo, iyi tii hapana mubvunzo kuti yemhando yemuti muWuyi. Sinamoni tii yakawanikwa kweanopfuura makore zana.
Tieguanyin Chinese Brand Brand Organic Yakasununguka Yekutanga Giredhi Hutano Uye Silm Yakakwirira Kutengesa Tieguanyin Wholesale
"Tieguanyin" harisi zita reiyo chete, asiwo zita remhando yetii. Tieguanyin tii iri pakati pegreen tii uye nhema tii. Iyo semi-yakaviriswa tii. Tieguanyin ine yakasarudzika "guanyin rwiyo" nekunhuhwirira kwakajeka uye nhetembo yakanakisa. Iine orchids echisikigo mushure mekubikwa. Kunhuwirira, kuravira kwakachena uye kwakasimba, kunhuwirira kwacho kunogara kwenguva refu, uye kune mukurumbira we "mabhuru manomwe anonhuwirira anoramba aripo". … Tieguanyin ine huwandu hwakawanda hweamino acid, mavitamini, zvicherwa, tii polyphenols uye alkaloids, ine mishonga yakasiyana siyana uye mishonga yekurapa, uye ine basa rekuchengetedza hutano uye kuchengetedza hutano.
Tea Puer Tea Yunnan Pu'Er Tea Organic Pu-erh Tea Organic Sheng Puer Keke
Pu'er yakaibva tii iti inogadzirwa kubva kuYunnan hombe-shizha zuva-rakaomeswa girini tii sechinhu chisina kugadzirwa uye chakagadziriswa kuburikidza nemaitiro akadai sekuvira. Ruvara irwo maroon, iyo tambo yakachena uye ine yakasarudzika hwema hwekunhuhwirira. Pu'er yakaibva tii ine hunyoro muchimiro uye ine hutano mabasa senge zvinovaka muviri mudumbu, kuchengetedza dumbu, kudziyisa dumbu, kudzikisa ropa lipids, uye kuonda.
Iyo Yakanakisa Organic Natural Pu'er Tea Yekuderedza Moto Uye Inovaka Dumbu
Pu'er mbishi tii inoreva akasiyana Yunnan tii mashizha (Bingcha, Brick Tea, Tuocha, Dragon Bhora). Pu'er akaberekerwa munzvimbo dzinopisa uye dzinopisa dzemasango emakiromita 1,200 kusvika 1,400. Inogoverwawo kuchamhembe kweVietnam, Thailand, Myanmar, neIndia.
Liubao Tea Yakakwira Giredhi OEM 100% Mamiriro Congou Nhema Tii Shizha Ratsva
Liubao tii ipost-yakaviriswa tii, iri yerima tii chikamu. Iyo yakatanga muLiubao Township, Cangwu County, Wuzhou Guta, Guangxi. Mashizha acho akakwenenzverwa, anogadzirwa zvinoenderana nemaitiro, uye iti nhema ine hunhu hwakasiyana. Nhoroondo, iri inozivikanwa "Chinese tii inotengeswa nevekunze Chinese", inonyanya kutengeswa kuGuangdong, Guangdong, Hong Kong, Macao uye Southeast Asia. Nekuvandudzwa kweindasitiri, zvishoma nezvishoma yakave inozivikanwa pasi rose.
Phoenix Dan Cong Yakakwira Giredhi OEM 100% Mamiriro Congou Nhema Tii Shizha Ratsva
Zita rePhoenix Dancong rakanaka, asi nzira yekutumidza iri nyore. Phoenix izita renzvimbo, Dancong zvinoreva kunhonga uye kugadzira kubva kune imwechete tii muti. Iyo inonzi Shan Cong zvirokwazvo chirimwa chakanakisa chakasarudzwa kubva muboka remiti yetii nezvizvarwa zvakapfuura zvevarimi veti muFenghuang Mountain. Sarudzo yavo yekusarudza ndeyekutarisisa hunhu hwemhando, kunyanya iko kunhuhwirira, kutarisisa mhando uye kwete huremu. Iyi ndiyo embryonic fomu yetii kubereka. Iyo yekutanga nzira yekusarudza yakanakisa tii zvirimwa inogona kuverengerwa kune iyo nzira yekusarudza chaiwo hunhu.
Chinese huwandu hweDongding Oolong
Dongding oolong tii, inowanzozivikanwa seye Dongding tii, inozivikanwa kwazvo tii muTaiwan. Dongding oolong tii rudzi rweTaiwan Baozhong tii. Iyo inonzi "baozhong chai" inonzi zita kubva kuAnxi, Fujian. Chitoro chemuno tii chinotengesa tii nemapepa akaenzana akasvika mativi akaenzana, mukati nekunze zvakafananidzwa, uye matai mana eti anoiswa mubhegi rekwerekwere, uye kunze kwebhegi kwakafukidzwa netiyi teki, uye ndokuzotengeswa nebhegi, iyo inonzi "mhodzi yemabhegi." . Taiwan Baozhong Tea ine zvinyoro kana zvine mwero yakaviriswa tii, inozivikanwawo se "Inonhuhwirira Oolong Tea".
Da Hong Pao Tea yeChinese tii
Dahongpao, inogadzirwa muWuyi Mountain, Fujian, ndeweOolong tii ine mhando yepamusoro. Chinese chai yakakurumbira tii. Chimiro chakasungwa chakasungwa, ruvara rwakasvibira uye shava, uye muto unopenya orenji uye yero mushure mekubikwa, uye mashizha akatsvuka uye akasvibira. Chinhu chakatanhamara chehunhu hwehupfumi hwekunhuhwirira neorchid, hwema hwepamusoro uye hunogara kwenguva refu, uye iri pachena "dombo rwiyo".